Liverpool Oo Guuldaro Dhabarka U Saarisay Tottenham, Roberto Firmino Oo Ka Caawiyay
HomeHoryaalka IngiriiskaLiverpool oo guuldaro dhabarka u saarisay Tottenham, Roberto Firmino oo ka caawiyay
December 17, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Gool uu waqtigii dhimashada ciyaarta dhaliyay Roberto Firmino ayay Liverpool ku garaacday Tottenham oo marti ku aheyd Anfield iyagoo dubtay 2-1 islamarkaana la wareegay hogaanka horyaalka Premier League.
Reds ayaa hogaanka ku hormartay ciyaartii caawa ka dib gool uu u saxiixay Mohamed Salah laakiin waxay Son Heung-min ayaa u barbareeyay Tottenham ka hor inta uusan Firmino gusha saxiixin daqiiqadii 90aad.
Natiijadaan ayaa ka dhigan in Liverpool ay si rasmi ah u la wareegtay hogaanka Premier League iyagoo leh 28 dhibcood halka Tottenham oo labaad ku jirta ay leedahay 25 dhibcood.
Liverpool ayaa sii dheereysatay rikoodhkeeda aan looga badinin garoonka Anfield horyaalka Premier League iyagoo sii maraya 66 kulan.
Waxayna ciyaarta ku soo dhamaatay 2-1 oo ay Liverpool ku garaacday Tottenham iyagoo la wareegay hogaanka Premier League.
Kooxda Liverpool ayaa marti u ah kooxda newcastle united 19 bishan December halka Tottenham ay la ciyaaridoonto kooxda leicester city 20 bisha